दृष्टिकोण | Nepal First Dalit Online News Portal: www.dalitonline.com
अधिकांश लेखकले बुझने र भन्ने गरेभन्दा विपरित दलित समस्या सांस्कृतिक समस्या मात्र होइन । दलित समस्या अर्थात दलित र दल्ने समुदायबिचको समस्याको प्रकृति बृहत र सामग्रिक चरित्रको छ । यो संस्कृतिको क्षेत्रभित्र मात्र खुम्चिएर बसेको छैन । यसले धेरै फराकिलो र बलियो किसीमले, प्रणालीगत हिसाबले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रसमेत ओगटेको छ ।
– मेघराज रसाइली
संविधान लेखन प्रक्रिया जारी रहेका बेला उपेक्षित र उत्पीडितको अधिकार स्थापित गर्ने …
तीन हजार वर्षको दलन
आफ्नो समयका सशक्त चिन्तक पुष्पलाल र बीपी दुवैले नेपाली समाजलाई सामन्तवादी भने तर कस्तो खालको सामन्तवादी हो मौलिकताभित्र पस्न सकेको देखिएन। त्यही जातको मौलिकता गुमाएको सामन्तवादको व्याख्याका पछि-पछि आजसम्म कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुत्तिँदै आयो। हाम्रो सामन्तवादको जग वर्णव्यवस्था हो। झापामा बस्ने मान्छेले दार्चुलाको रामबहादुर परियार -दमाई) लाई चिन्नु पर्दैन, जात थाहा पाउनेबित्तिकै भनिदिन सक्छ यो सामन्तचाहिँ होइन।
‘२०३६ सालदेखि काठमाडौंले व्यङ्ग्य गरिरहेको छ’ : आहुती
माओवादी हारका पछाडी राजधानीमा तीन वटा कुराले काम गरेको छ । पहिलो, माओवादीले राजधानी बाग्मती उपत्यकामै आफ्नो संगठनात्मक कामलाई व्यवस्थित गरेकै छैन । माओवादीको संगठनात्मक संरचना लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेतालाई भने–चुनावको मिति घोषणा गरौ त्यसपछि संविधान संशोधन
काठमाडौँ, फागुन ७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित निर्णायक …
अम्बेडकरबाट नेपाली दलितले केही सिकौं
विगतको तथ्यांक हेर्दा देखिन्छ , माखो पनि नमारेका यिनले कसरी दलितको मुक्ति गर्ला भनेर ? तर मार्न सक्छन् त के शदियौ देखी जरो गाडेका जातीय नेताको पाउ मोल्ने र छोटो समयको लागी आफ्नोे स्वार्थपूर्ति गर्ने । अनि प्रश्न उठ्छ यसले के ६० लाख जती रहेका नेपाली दलितको मुक्ति गर्ला ?
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना र दलित
अहिलेको राज्य पुनर्सरचनामा सत्ता शक्तिको मुख्य आधार स्थानीय तहमा केन्द्रित छ । हिजोको जिविसभन्दा पनि अहिलेको स्थानीय निकायलाई त्यसैले धेरै अधिकार दिइएको हो । अब गठन हुने गाउँपालिकालाई २ सम्मको विद्यालय अनुमति दिनसक्ने अधिकार दिइएको छ । दलित समुदायका समस्या पनि स्थानीय तहमै केन्द्रित छन् र ती समस्या समाधानको प्रयास पनि मूलतः स्थानीय तहबाटै हुनु जरुरी छ ।
के शिक्षालय बालबालिका कुट्ने थलो हो ?
अन्धविश्वासपुर्ण सामाजिक मनोविज्ञानले ग्रस्त भएका शिक्षकले देशका कर्णधारलाइ कस्तो शिक्षा देलान ? के शिक्षालय बालबालिका कुट्ने थलो हो ? खोइ मानव अधिकार ? खोइ बाल अधिकार ? हाम्रो देशमा मनोविज्ञानको पढाइ अब हरेक तह अनुसार हुनुपर्दछ, तर विडम्बना हाम्रो देशमा मनोविज्ञान विषय र यसको विकास क्रम एउटै देखिन्छ , निद्राबाट ब्युँझिएर पुन निद्रामा परेपछि उठ्न नसकेको कुम्भकर्ण जस्तो ।
हिन्दुधर्मले दलितहरुसंग माफी माग्नुपर्छ
गाई मारिदा देशभर प्रदर्शन गर्नेहरुले मान्छे मारिँदा चु सम्म नबोल्नु उदेक लाग्दो नै छ । अझै बोक्सीको आरोपमा, जातकै आधारमा मान्छे कुटिँदा, मारिँदा नबोल्नु आश्चर्यजनक छ । हिन्दु भएर पनि यो देशका कथित दलितहरुले पशु भन्दा पनि तल्लो जीवन बाँच्नु परिरहेको छ । उनीहरुले आत्मसम्मान पाएका छैनन् । मान्छे हुनुको परिभाषा पाउनसकेका छैनन् ।
साठी लाख दलितको रोबोट !
विहानको १०ः४५ तिर राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालयमा आइपुगे । त्यहाँ एक जना नायव सुव्वा चिजमाया विश्वकर्मा आफनो फाइल पल्टाउँदै थिइन् । त्यसै वेला हस्याङ र फस्याङ गर्दै आइपुगिन् शाखा अधिकृत लक्ष्मी राई । अनि सुरु भयो भलाकुसारी गर्ने काम ।